GUOWANG T-1060BF KUFA-KUCHENGA MACHINE NEMAHARA
Chizvarwa chitsva cheT-1060BF chine huwandu hwetekinoroji nyowani uye masisitimu anozokubatsira iwe kuvandudza kugona zvakanyanya uye nekuunza mukana wemakwikwi. Iine basa rekuparadzanisa otomatiki ekutsikirira mabhodhi nemaseti maviri ekurasa marara. Kunyangwe marongero ekudhinda uye mashandisiro erudzi rweiyo substrate, anogona kushandiswa mukumhanya-mhanya kushanda kubvisa marara, pamwe nekuona kupatsanurwa kwakarongeka kwezvakapedzwa zvigadzirwa. Yekutorera kumhanyisa inotora pneumatic otomatiki kusimudza kumusoro uye pasi, uye inopihwa yakajairwa yekukurumidza-kukiya kifaa uye yepakati-mutsara yekumisikidza basa, izvo zvinogona kuita kuti gadziriro yekuita ikurumidze uye nyore. Iyo yekumberi uye yekumashure oparesheni nzvimbo inoshandisa 19 inches LED inobata masikirini, zvichiita kuti masisitimu akaomesesa ave nyore uye akajeka, kuwedzera kugona kwemidziyo.
Yakakwira mhando MABEG inosimudza musoro inotumirwa kubva kuGerman (sarudzo), mana ekunhonga-masucks uye 4 kumberi masucker, ita chokwadi kugadzikana uye nekukurumidza kudya.
Yekutanga-kurodha mudziyo wekudyisa bepa usingamise muchina, yakakwira stack kukwirira 1600mm
Kugadzirira-kurodha mateki anobatsira opareta Push mapepa kuti arongedze chinzvimbo nenzira kwayo uye zviri nyore.
Mativi edivi anogona kugadziridzwa kuti akwane mapepa akasiyana.
Bepa rakaendeswa kumberi kwekumberi rinodzikira pasi kuona chokwadi kumira.
Kuchinjisa ndiro ndiro yesimbi isina kuiswa kunze kubva kuGerman kuti pepa riendese rakatsetseka uye nekukurumidza.
2. UNITI-KUCHENGA UNIT
Nomazvo uye kudzikama kudzora kufa yekucheka kumanikidza, inodzorwa neFUJI servo mota
Nyore kushandisa yakajeka graphic ne 19 padiki yekubata skrini ine chaiyo kusvika ku0.01mm.
Kufa-kucheka kumhanyisa uye ndiro zvakavharwa ne pneumatic cylinder kubva kuJapan SMC, ine maseru maseru ekudzivirira kukuvara kunokonzerwa nezvinhu zvevanhu.
Yekucheka-yekudzingirira inotora iyo yepakati-mutsara sisitimu yekukurumidza kumisikidza, kuitira kuti iye anoshanda haafanire kufunga nezve kuruboshwe-kurudyi chinzvimbo chefa bhodhi.
Anofa-ekucheka mabhodhi easina-muyero saizi anogona zvakare kuiswa nekushandisa anobatsira maturusi ekurerutsa kushandiswa kwemakasitoma ekucheka mabhodhi kubva akasiyana mamodheru.
Gripper bar, yeakasarudzika aruminiyamu chiwanikwa, iyo yepamusoro mushure meiyo oxidation kurapwa inotora kaviri-cam nzira yekuvhura kuburitsa bepa panguva yekumhanya. Iyo inogona kudzikisira inertia yebepa kunotora rakatetepa bepa muhurongwa nyore.
3. KUKUNDA UNIT
Pneumatic kusimudza kupfekedza kudzingirira
Center-line system uye yekukurumidza-kukiya chishandiso chekutorera bhodhi kuti uwane kukurumidza basa kuchinja
Kutorera kudzingirira chinzvimbo kuyeuka.
4. KUSHANDA YEMAHARA
Center-line system uye yekukurumidza-kukiya chishandiso chekuvhara bhodhi kuti uwane kukurumidza basa kuchinja
Bhatani rimwe chete remuenzaniso kutora pepa, nyore kuongorora kwehunhu.
Akangwara mashandiro kubva kumonitor kuti asarudze akasiyana maitiro ekuisa sheet.
5. CHITANGANISO CHOKUPA
Isiri-yekumira yekuendesa unit.a
Otomatiki bepa murwi kuchinjisa, chinja unoshanda pallet kune dhiraivhu yuniti, wobva waisa isina chinhu nhovo kumirira kuenderera, inogona kudzikisira manyorero kupindira uye inovimbisa isinga mire mira.
6. BASA KUyerera
Kunonyanyisa bepa saizi 1060 * 760 mm
Minimum pepa saizi 400 * 350 mm
Kunonyanyisa kucheka saizi 1060 * 745 mm
Kunonyanyisa Die-kutema ndiro saizi 1075 * 765 mm
Die-kucheka ndiro ukobvu 4 + 1 mm
Kucheka kutonga kukwirira 23.8 mm
Kutanga kufa-kutema mutemo 13 mm
Gripper margin 7-17 mm
Kadhibhodhi spec 90-2000 gsm
Kadhibhodhi ukobvu 0.1-3 mm
Corrugated spec ≤4 mm
Kunonyanyisa kushanda kumanikidza 350 t
Kunonyanyisa vanofa-achicheka kumhanya 7500 S / H.
Kudyisa bhodhi kukwirira (incl. Pallet) 1800 mm
Isiri-mira kudyisa kukwirira (incl. Pallet) 1300 mm
Dhirivhari kureba (incl. Pallet) 1400 mm
Main mota simba 18 kw
Simba rese remuchina 24 kw
Voltage 600V 60Hz 3ph v
Cable ukobvu 16 mm²
Kudzvinyirirwa kwemhepo 6-8 bhaa
Kushandiswa kwemweya 300 L / Min
Kugadziriswa Nyika yavakabva
Feeder musoro ChiGerman Mabeg
Pre-kurodha mudziyo, Isina-mira kudyisa
Kumberi & padivi kuisa photocell induction
Chiedza chechiedza chinodzivirira mudziyo
Pombi yepombi ChiGerman Becker
Dhonza / Push switch switch yerutivi gwara
Die chase ChiGerman FESTO
Center mutsetse kurongedza system
Gripper modhi inotora yazvino mbiri cam cam tech Japani
Yakagara yakatambanudzwa yemhando yepamusoro cheni ChiJerimani
Torque limiter uye index giya bhokisi kutyaira Japan Sankyo
Kucheka ndiro pneumatic ejecting system
Otomatiki lubrication uye kutonhora
Otomatiki cheni lubrication system
Main mota ChiGerman SIEMENS
Pepa miss detector ChiGerman LEUZE
3-nzira yekubvisa chimiro
Pneumatic kukiya mudziyo
Kurumidza kukiya system
Kuvhara kuburitsa unit
Dhirivhari mota ChiGerman NORD
Kupedza chigadzirwa kuburitsa mota ChiGerman NORD
Waste yekunhonga mota Shanghai
Sekondari dhirivhari mota ChiGerman NORD
Otomatiki kuendesa stack switch basa
Otomatiki kudyisa mudziyo ChiGerman FESTO
Kudya mweya yekuyamwa mota
Yakakwira mhando yemagetsi zvikamu EATON / OMRON / SCHNEIDER
Chengetedzo controller ChiGerman PILZ module yekuchengetedza
Main yekutarisa 19 padiki AMT
Yechipiri yekutarisa 19 padiki AMT
Inverter SCHNEIDER / OMRON
Chinja LEUZE / OMRON / SCHNEIDER
Chinja ChiGerman MOELLER
Yakadzika-magetsi kugovera ChiGerman MOELLER
Zvadaro: GUOWANG C-106Y KUFA-KUCHENGA UYE FOI KUTSIKIRA MACHINE QuotATION LIST
Auto Die Kucheka Muchina
Otomatiki Kufa Kurova Machine
Otomatiki Pepa Die Kucheka Muchina
Die Kucheka Uye Creasing Machine
Die Kucheka Muchina Wemabhokisi Akagadzirwa
GUOWANG R130Q ANOGONA KUFA-CUTTER NEMAOKO
GW kaviri chiteshi kufa-kutema uye foil tsika ...
GUOWANG C106Q ZVINOKOSHA ZVINOFA-CUTTER NEMAHARA
GUOWANG C80Q ANOGONA KUFA-CUTTER NEMAHARA
GUOWANG C80 ZVINOKOSHA ZVINOFA-ZVINOTAURA PASI PAKUKUNDA
GUOWANG C106 ZVINOKOSHA ZVINOFA-CUTTER PASINA KUTAURA ...